लाइसेन्सको ट्रायलमा ६० अंक प्राप्त गरे पुग्ने नयाँ नियम लागु गर्न स्वीकृति,कहिले लागु हुने? - DURBAR TIMES
HomeNewsलाइसेन्सको ट्रायलमा ६० अंक प्राप्त गरे पुग्ने नयाँ नियम लागु गर्न स्वीकृति,कहिले...
लाइसेन्सको ट्रायलमा ६० अंक प्राप्त गरे पुग्ने नयाँ नियम लागु गर्न स्वीकृति,कहिले लागु हुने?
प्रयोगात्मक परीक्षामा शतप्रतिशत नै ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सहज बनाएपछि अब ६० अंक प्राप्त गर्ने परीक्षार्थी समेत उतीर्ण हुनेछन् । यसका लागि निर्देशिकाको दफा १२ (९) र १२ (१४) मा रहेको कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्न स्वीकृति दिएपछि अब यातायात व्यवस्था विभागले सो अनुसार परिवर्तन गरी नयाँ नियम बनाउनेछ । “मन्त्रालयबाट सैदान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ, चाँडै कानूनी प्रकृया पूरा गरी नयाँ यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि लागु गर्ने छौं” यातायात विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भने । तर उनले मिति तोकेका भने छैनन् ।
Previous articleवामी माइक्रोफाइनान्सको शेयरमुल्यमा उच्च वृद्धि, कति पुग्यो ?
Next articleपछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप १६२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि